Ny Zavakanto Rosiana Momba Ny Fijokoana “Faran’izay Zokiny” · Global Voices teny Malagasy
Ny Zavakanto Rosiana Momba Ny Fijokoana “Faran'izay Zokiny”
Voadika ny 23 Janoary 2019 7:19 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español, English
Sary: Shane Huang / Flickr CC 2.0. Navoakan'i Kevin Rothrock.
Amin'ny manaraka rehefa mba mindrana ny métro ao Saint-Pétersbourg ianao, mitandrema amin'i Egor Tsvetkov, 21 taona, tanora mpaka sary. Vao haingana, napoitrany ny tetikasa iray vaovao antsoina hoe “ANGON-DRAKITRA GOAVANA NY ENDRIKAO”, izay namboariny tamin'ny alalan'ny fakàna sary antsokosoko ny ampahany tamin'ireo mpandeha nipetraka manatrika azy tao anaty métro-n'ny tanàna, tsy mangataka fahazoandàlana akory.
Tamin'ny fampiasàna ireo sary ireo, mitodika any amin'ilay tolotra an-tambajotra antsoina hoe FindFace i Tsvetkov, izay ahafahanao mandefa kianjoanjo sary mifandraika amin'ny endrik'olona iray. Amin'ny alalan'ny teknolojia famantarana endrika, ny FindFace avy eo no manao ny fikarohana ao anatina angon-tsary an'ny Vkontakte, ilay tambajotra sosialy malaza be ao Rosia. Raha mahita iray mitovy amin'izany izy, ataony izay azony atao mba hamantarana ilay olona asehon'ilay sary. Afaka hita amin'izay fomba izay avokoa ny sary rehetra nalefa sy nasiana famantarana ao amin'ny Vkontakte, raha toa ny mpampiasa aterineto nifidy ny hahafahan'ny daholobe mahita ny zavatra avoakany. (Manao an'izay avokoa ny ankamaroan'ireo mpampiasa).
Tamin'ny volana Febroary 2016 ny FindFace no natomboky ny orinasa N-Tech.lab avy ao Maosko, izay manazava fa noforonina ilay tolotra mba hanamora an'ireo fihaonana anaty tambajotra, amin'ny fahafahan'ireo mpampiasa mba haka sary na iza na iza eny andalam-be, mamantatra ny toerana misy ny mombamomba azy ireo eny anaty tambajotra sosialy samihafa ary mahafantatra bebe kokoa mikasika azy ireo, mialohan'ny fanandramana hifankahafantatra mivantana.
Lazain'i Tsvetkov fa vitan'ny FindFace ny nahita 70% tamin'ny kaonty media sosialin'ireo tanora izay nalainy sary, saingy very amin'ny antsasany io ho an'ireo sarin'olona efa antitra.
Hitanareo eto ambany ny ohatra fampifanakaikezana noforonin'i Tsvetkov. Nohamaizinin'ny Global Voices ny endrik'ireo voakasika noho ireo antony fiainana manokana.
Sary: Egor Tsvetkov / Birdinflight.com
Nolazain’i Tsvetkov teo amin'ny vohikala Bird in Flight fa tiany hotsapaina hoe ahoana ny fomba nandravàn'ny aterineto ny ampihimamban'ny Fanjakana amin'ny famantarana ny maha-izy ny tsirairay amin'ny alalan'ireo sary sy lahatsary. Na izany aza tsy hoe mahatalanjona fotsiny ny tetikasa ara-javakanto ataony. Manazava i Tsvetkov fa asehon'ny asany hoe matetika ny “narsisisma nomerika” dia “miteraka” fijokoana an-tserasera. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny famoahanao ny sarin'ny tenanao ety anaty tambajotra dia manome vahana an'ireo olon-tsy fantatra hamantatra ao anaty aterineto ny toerana misy anao, ka hahafahan'izy ireo mahalala ireo torohay tsy nozarainao akory tamina vahiny sendra nifanena taminao tao anaty fiarandalamby.
“Very ankehitriny ny fahalalahan'ny olona hanao zavatra ankalamanjana ary ny fahazoana antoka fa tsy hisy olona te-hahalàla izany”, hoy ny nambaran‘i Tsvetkov teo amin'ny vohikala Apparat.cc, ary nampiany hoe “somary mampitahotra izany. Ankoatra ireo fototra fakàna sary an'ireo tambajotra sosialy, marobe ireo toerana hafa: banky, trano fanaovana fanatanjahantena [sy sisa sy ny sisa]. “Ankehitriny, ao anatin'ny segondra vitsy monja, ny fikarohana iray tsy mitonona anarana sy haingana atao amin'ny pejy media sosialin'ny olona iray dia afaka mamadika zavatra iray tsy azy akory ho lasa namana akaiky azy”, hoy ny fampitandreman'ilay mpakasary.
Saingy mety hanamafy ny tena olana nezahan'i Tsvetkov hasongadina ve ilay tetikasa ? Ny Talen'ny Global Voices Advox Ellery Roberts Biddle, izay manana traikefa manokana amin'ireo olana momba ny sotasota an-tambajotra sy ny fiarovana ny fiainana manokana nomerika, dia nanana an'ity izy ho ambara momba ny tena fiantraikan'ilay tetikasa amin'ny fiainana tena izy:
Tena mametraka olana ara-pitsipika amin'ireo ambaratonga sasantsasany io. Tsy nahazo alàlana haka na hamoaka an'ireo sary ireo i Tsvetkov. Ary tsy nanao ezaka akory izy mba hanakona ny maripamantarana manokana an'ireo resahiny izay tsy mahalala n'inon'inona akory.
Afaka hanamafy izy hoe ireo sary nalaina tao anaty métro ireo, tsy nisy nanampiana na nanalàna, dia tsy maneho zavatra betsaka noho izay efa nalefan'ireo olona ireo ihany teo amin'ny VK, saingy tsy mitovy ny fifidiananao hametaka ny sarinao eo amina vovonana iray an'ny media sosialy ho azon'ny daholobe jerena sy ny fifidianana ny hametaka izany na aiza na aiza ao anaty aterineto. Manan-danja be ny manodidina ny tranga iray – mety tena tsy misy tsiny ny sarina vehivavy iray mitafy akanjo tsara tarehy, ao anatin'ny tambajotra sosialy iray, saingy raha vao apetaka ao anatina andiana sary amin'ny alàlan'ny fakantsarin'ny mpijoko tahaka izao, mpisotasota iray, dia manomboka milaza zavatra hafa ilay sary.
Ataon'i Tsvetkov ihany koa izay maha-mora hita sy mora tadiavina ny sarin'izy ireo. Noraisin'ireo tranga ara-pitsaràna isankarazany ho anaty kajiny ny hevitra hoe “fahafahana mampiharihary” – izay fantatra fa mety hiantraika amin'ny vokany na ny tanjaky ny votoatin-javatra iray an-tambajotra ny fahamoran'ny fahafahana mahita na “mampiharihary” azy.
Rehefa nanontaniana izy raha mety ho loza na tsia ho an'ireo olona izay alainy sary ny tetikasany, nilaza tamin'ny RuNet Echo i Tsvetkov fa aloha loatra ny hilazàna izany. “Heveriko fa tokony ho andrasantsika aloha izay ho fivoarany”, hoy ny filazany. “Ara-teoria, io tolotra [FindFace] io dia mety ampiasain'ny mpamono olona na mpanangom-bola iray mihaza ny olona ananany trosa.”
Afaka namantatra ny misy ny kaonty Vkontakte an'i Tsvetkov ny RuNet Echo, tamin'ny alalan'ny FindFace sy ny sary navoaka avy tamin'ny antsafa nataony ho an'ny Bird in Flight. Toa efa mampihatra sahady izay noventesiny i Tsvetkov, amin'ny alalan'ny fizaràna torohay manokana faran'izay kely indrindra ho hitan'ny daholobe, na dia nandefa sarintena (selfies) ampolony aza izy, anisan'izany ny snapshot-n'ny fahazoandàlana azony hitsidihana any Eoropa.
Marobe ireo sary an'ny tetikasan'i Tsvetkov no azo jerena eo ambany. Eo amin'ny ankavia, ho hitanao ireo sary izay tena noraiketiny tao anaty métro. Eo amin'ny ankavanana kosa, ireo sary izay nozarain'ireo olona ireo ho hitan'ny daholobe teo amin'ny Vkontakte. Nohamaizinin'ny RuNet Echo ireo endrika rehetra noho ny antony fiainana manokana.
Egor Tsvetkov / Birdinflight.com
Mba hahitàna bebe kokoa, jereo ny tafatafa an'i Tsvetkov ao amin'ny Birdinflight.com.